Chhaharaa | उद्यमीहरुले तिरेनन् अरबौं राजश्व
उद्यमीहरुले तिरेनन् अरबौं राजश्व
काठमाडौं । छसस । करोडौं मूल्यका गाडी चढ्ने र आलीशान महलमा बस्ने ठुल–ठुला उद्योगब्यवसायका मालिकहरु नै सरकारकार तिर्नुपर्ने राजश्व कर रकम समयमा तिरेका छैनन् । बरु बदनाम हुने तर राजस्व नतिरेर नै गुमनाम नहुने नीति उनीहरुले अख्तियार गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । नाम चलेका प्रतिष्ठित व्यापारी, ठेकेदार कम्पनी, उद्योगी, व्यापारी लगायतले मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) वापतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व रकम समयमा तिरेका छैनन । ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी, संचार गृह, सरकारी संस्थान, छापाखाना लगायतका करदाताले नेपाल सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने राजश्व रकम नतिरेकोआन्तरिक राजश्व कार्यालय पुतलीसडकले जनाएको छ ।
गत २०७८ पुस २५ गते कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)बक्यौता वापतको रकम १५ दिन भित्रमा दाखिला गर्न २५६ करदातालाई ताकेता गरेको छ । उनीहरूले ५ लाखदेखि करोडौं रकम बक्यौता तिर्न आनकानी गरिरहेका छन। उनीहरूलाई कर कार्यालयले १५ दिनको सयमसीमा तोकेरनै सुचना जारी गरेको छ ।
बक्यौता दाखिलाको लागि विभिन्न समयमा पत्रचार, टेलिफोन, संकलन भ्रमण समेतबाट जानकारी गराइएको भएपनि आलटाल गरेकै कारण सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र बक्यौता मूल्य अभिबृद्धि कर दाखिला गरिसकेको वा गर्न नपर्ने प्रमाण भए पेश गर्नको लागि पनि कर कार्यालयले करदातासँग अनुरोध पनि गरेको छ । अन्यथा मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) मा उल्लेखित कुनै वा सवै तरिका अपनाएर करदातासँग बक्यौता कर असुल गरिने चुनौती पनि कार्यालयले दिएको छ ।
करोड भन्दा बढी बक्यौता नतिर्ने ब्यवसायीहरु को–को छन् ?
करोड भन्दा बढी बक्यौता कर नतिर्ने पहिलो नम्वरमा अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का राकेशकुमार अग्रवाल परेका छन् । उनले ८ करोड ६२ लाख ९१ हजार भन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । आङकाजी शेर्पाको बैदेही इक्युमेन्ट एण्ड कन्ट्रकसन प्रा.लि.बाट ८ करोड ३४ लाख २९ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ बक्यौता असुल हुन बाँकी रहेको सार्वजनिक सूचनामा जनाइएको छ ।
यस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले पनि सरकारलाई बक्यौता कर तिरेको छैन । सो संस्थानले २ करोड ४८ लाख ११ हजार भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
एउटा टेलिभिजन कम्पनीका संचालकले पनि सरकारलाई ५ करोड ५३ लाख ५१ हजार भ्याट बक्यौता कर बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । लक्ष्मीप्रसाद प्याकुरेलको एभरेष्ट डिष्ट्रिव्युसन प्रा.लि.ले १ करोड ९५ लाख २१ हजार भ्याट बक्यौता बाँकी रहेकोले कर दाखिला गर्न कार्यालयले ताकेता गरेको छ । शंकर माली निर्माण सेवा प्रा. लि.ले नेपाल सरकारलाई १ करोड ३७ लाख ८९ हजार भ्याट बक्यौता कर बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
मनिशप्रसाद राजभण्डारीको आई.एम.एस. एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रा. लि.ले १० करोड ६२ लाख २९ हजार भन्दा बढी बक्यौता रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । राम कार्की प्रमुख रहेको गौरीशंकर फर्निसिङ्गले १ करोड २८ लाख ५७ हजार बक्यौता कर बुझाउन बाँकी रहेको छ । दि गणेश इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले २ करोड ३२ लाख ७० हजार भन्दा बढी बक्यौता रकम कर कार्यालयमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
क वर्गका चर्चित निर्माण व्यवसायी ठेकेदार कम्पनी सकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रा. लि. अनामनगरले सरकारलाई १४ करोड ९९ सय लाख बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । भ्याट नम्वर ३०१५५१८१२ का करदाता ग्याबिओनेटले पनि १५ करोड ९० लाख बक्यौता कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको जनाइएको
एक लाख भन्दा माथि भ्याट बक्यौता रहेकाहरु
कृष्णकाजी बादेको बागबजार छापाखानाले ८५ लाख बक्यौता रकम कर कार्यालय पुतलीसडकमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । प्रभाशंकर श्रीवास्तवको एशिया प्यासिफिक कम्युनिकेशन्स एशोसियट प्रा.लि.ले ९४ लाख १९ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ भ्याट बक्यौता दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ । बासुदेव आचार्यको कान्तिपुर मेनेज्मेन्ट प्रा.लि.ले ९ लाख ७५ हजार र रोमीलाल श्रेष्ठको सुलक्स सेन्टरले ७८ लाख ९८ हजार बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
रामेको कन्भिनियन्ट स्टोर प्रा.लि.ले ५८ लाख ३६ हजार भन्दा बढी भ्याट बक्यौता रकम कर कार्यालयमा दाखिला गर्न बाँकी रहेको छ । रुपक सैंजुको अग्रणी प्रेस प्रा.लि.ले ५३ लाख ५० हजार ५ सय ६८ रुपैंया र उषा अग्रवालको नाममा रहेको अमि अभि स्टोरले ५९ लाख ६३ हजार ९ सय ६३ रुपैंया भ्याट बक्यौता कर रकम दाखिला नगरेको कर कार्यालयले जानकारी दिएको छ । दी पार्क एभेन्यु सर्टिङ्ग–सुटिङ्ग एण्ड टेलरिङ्ग हाउसको नाममा ६० लाख १ हजार ४ सय ६९ रुपैंया बक्यौता रहेको छ ।
सरोज राईको नाममा रहेको बैकिङ अटोमेशन सोलुशन प्रा.लि.को नाममा ८७ लाख २९ हजार र कृष्ण बादेको गणेश इन्टर नेशनलले ६२ लाख ६२ हजार बक्यौता कर दाखिला गर्न बाँकी राखेको पाइएको छ । चन्द्रलाल ठाकुरको द क्यापिटल मार्केटिङ्गबाट ५१ लाख ६५ हजार ८ सय ९० रुपैंया बक्यौता कर रकम सरकारले असुली गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
काजी लामाको साइनो रेष्टुरेण्ट बार प्रा.लि.बाट सरकारले ६० लाख ८८ हजार बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजेन्द्र भरेलको फाइन डिजाइन एण्ड प्रेस प्रा.लि.ले ५४ लाख १२ हजार, भुषण तण्डुकारको शाख सेक्युरिटी कम्पनी प्रा.लि.ले ३४ लाख ६९ लाख १ सय ९० रुपैंया बक्यौता राजश्व रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ओम थापाको बिजमाण्डु प्रा.लि.ले ४३ लाख ६५ हजार मुअक बक्यौता कर दाखिला नगरेको देखिन्छ ।
यदुराज ओलीको पी.वाई.सी एण्ड एशोसियटले ४० लाख ८२ हजार र उत्तम नेपालको एलेगेन्ट वेयर्स ३५ लाख ४२ हजार ४ सय २९ रुपैंया बक्यौता राजश्व रकम दाखिला गर्न बाँकी राखेको छ । सौर्य दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक बोधराज त्रिपाठीको नाममा रहेको सिर्जना इन्टरनेशनल मिडिया प्रा.लि.ले ६० लाख ७१ हजार १८ रुपैंया भ्याट बक्यौता राजश्व रकम कर कार्यालयमा दाखिला गर्न आन्तरिक कर कार्यालय पुतलीसडकले ताकेता गरेको छ ।
यस्तै ६०१६४३२१९ भ्याट नम्वर भएको करदाता साइ बाबा कन्ट्रक्सनले ३५ लाख ७३ हजार भ्याट बक्यौता रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । विकास भण्डारीको थ्री प्रोडक्सन प्रा.लि.लाई ३१ लाख ३३ हजार २ सय ५२ रुपैंया र रमा गौतमको नाममा रहेको उषा ओभरसिजलाई ३३ लाख २८ हजार बक्यौता रकम दाखिला गर्न कार्यालयले ताकेता गरेको प्राप्त जनाइएको छ ।
रबिन्द्रमान मल्लको नाममा रहेको ल्याण्डमार्क रियल्टी एण्ड होटल अपार्टमेन्ट प्रा.लि.बाट कर कार्यालयले ७० लाख ८४ लाख भ्याट बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । प्योर साउण्ड प्रा.लि.का प्रशेन्द्रभक्त शाःखबाट ४४ लाख ९९ हजार भ्याट बक्यौता उठन बाँकी रहेको जनाइएको छ । इजन श्रेष्ठको वाप्कोस लिमिटेडको नाममा ३४ लाख ८९ हजार भ्याट बक्यौता उठन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । भुषण खरेलको नेत्रप्रकाश कन्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग सरकारले भ्याट वापतको ३५ लाख ८१ हजार ७ सय ४० रूपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको मेरी गोल्ड फुड्स प्रा.लि.बाट ६० लाख ४७ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ र रबि श्रेष्ठको जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले भ्याट बापत २६ लाख ७९ हजार दाखिला गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । टक्सन इन्जिनियर्स प्रा.लि.का कात्तिक पौलबाट भ्याट बापत सरकारले ३१ लख १९ हजार राजश्व रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यसैगरि चन्द्रकुमार गोल्छाको जोझियाङ जिन्लुन इलेक्ट्रोमेकानिक्स प्रा.लि.बाट ३४ लाख ७७ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ भ्याट राजश्व बक्यौता रकम उठन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
गत २०७८ पुष २५ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत कर कार्यालयले भ्याट वापतको बक्यौता राजश्व दाखिला गर्न करदातालाई सुचना जारी गरेपछि केही रकम दाखिला भएको कर्मचारी श्रोतले जानकारी दिएको छ । तर कुन कुन करदताले कति रकम जम्मा गरे भन्ने विषयमा अध्ययन भैरहेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतली सडकका प्रमुख कर अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा कोभिड संक्रमण भएर बिदा बसेका छन् । अन्य अधिकृतले सुचना दिन आनाकानी गरेका छन् ।